साँघुरिएको हाम्रो विज्ञान- विचार - कान्तिपुर समाचार
अहिले संसारभर विधागत बुझाइको गहिराइ जसरी बढ्दो छ, त्यसरी नै अन्तरविधागत सहकार्यको आयतन पनि फैलँदो छ ।
कार्तिक ६, २०७७ उत्तमबाबु श्रेष्ठ
सन् १९८८ मा अमेरिकाको इन्डियाना विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक एलिनोर अस्ट्रम अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएड) अन्तर्गतको विकेन्द्रीकृत वित्त व्यवस्थापन कार्यक्रमको अध्ययन गर्न नेपाल आइन् । नेपाल आएपछि उनको ध्यान विकेन्द्रीकरणले भन्दा समुदायमा आधारित प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनले खिच्यो ।
नेपालमा किसानहरूले सदियौंदेखि सामूहिक रूपमा व्यवस्थापन गर्दै आइरहेका सिँचाइ प्रणालीका बारेमा अनुसन्धान गर्न अस्ट्रमले सिन्धुपाल्चोक, चितवन र दाङको भ्रमण गरिन् । इन्द्रावती जलाधारदेखि देउखुरी उपत्यकासम्म पुगेर किसानहरूसँग अन्तर्वार्ता लिइन् र उनीहरूले व्यवस्थापन गरेका कुलो प्रणालीको अवलोकन गरिन् । नेपालमा समुदायले व्यवस्थापन गरेका सामुदायिक वन र सिँचाइ प्रणालीको उनको अध्ययन त्यसपछिका केही वर्षहरूसम्म जारी रह्यो, उनका पीएचडी शोधार्थीहरूमार्फत ।
नेपाल र केन्या, नाइजेरियाजस्ता अफ्रिकी मुलुकहरूमा गरेका अस्ट्रमका अनुसन्धानको निचोड– मानिसको प्रकृतिसँग हुने कस्तो प्रकारको अन्तरक्रियाको परिणामले स्रोत व्यवस्थापनमा दिगोपना आउँछ– बृहत् सैद्धान्तिक फ्रेमवर्कमा समेटियो । चरन, वन, मत्स्यजीविका, सिँचाइजस्ता सार्वजनिक स्रोत (कमन पुल रिसोर्सेस) को दिगो व्यवस्थापनका लागि समुदायले विकास गरेका संस्थागत प्रबन्धहरू राज्य वा दाताले थुपारेका योजनाभन्दा बढी प्रभावकारी हुने उनको निष्कर्ष थियो । अस्ट्रमले गरेको स्रोतको व्यवस्थापनमा सामुदायिक सुशासनको अनुसन्धानले सन् २००९ को ‘नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनोमिक साइन्सेस’ पायो । र, उनी अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार पाउने पहिलो महिला बनिन् ।
अर्थशास्त्रकी नोबेल लरिएट अस्ट्रम विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्रकी प्राध्यापक थिइन् । उनको अनुसन्धान प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनजस्तो अन्तरविधागत विषयमा थियो । अनुसन्धानका लागि नेपाललाई पनि आफ्नो कार्यथलो बनाएकी उनी नेपालको नास्टजस्तै अमेरिकाको राष्ट्रिय विज्ञान प्रतिष्ठान युनाइटेड स्टेट्स नेसनल एकेडेमी अफ साइन्सेसकी सदस्य थिइन् । वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई आर्थिक रूपले सघाउने अमेरिकी निकाय नेसनल साइन्स फाउन्डेसन (एनएसएफ) ले उनका थुप्रै अनुसन्धानलाई आर्थिक सहायता दिएको थियो । तर नेपालमै बसेर अनुसन्धान गरेकी भए, सायद अस्ट्रमको अनुसन्धानको विधा र दायरा न यहाँको नास्टको सदस्यताका लागि योग्य हुन्थ्यो, न त यहाँ वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई दिइने सीमित सहायता रकम उनले पाउनै सक्थिन् ।
समाज विज्ञान गयल नेपाली विज्ञान
विज्ञानका दुई मूल हाँगामध्येको एक हो– भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आदि समेटिएको प्राकृतिक विज्ञान जसले भौतिक जगत्‌लाई बुझ्ने र व्याख्या गर्ने गर्छ । अर्को हाँगो अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, कानुन, इतिहास आदि समेटिएको समाज विज्ञानले मानव समाज र सामाजिक सम्बन्धहरूको अध्ययन गर्छ । तर नेपालमा विद्यमान विज्ञान–अभ्यासमा समाज विज्ञानको हाँगो पूर्णतः गयल छ । नोबेल कमिटीले ‘इकोनोमिक साइन्सेस’ भनेर प्रदान गरिने अर्थशास्त्र लगायत समाज विज्ञानका थुप्रै विधालाई नेपालमा नीतिगत रूपमा र अभ्यासको हिसाबले विज्ञान मानिँदैन । नीतिनिर्मातादेखि वैज्ञानिक क्षेत्रका पदाधिकारी र आम बुझाइमा पनि विज्ञान भनेको प्राकृतिक विज्ञान मात्रै हो भन्ने छ ।
उदाहरणका लागि, नाममा ‘विज्ञान–प्रविधि’ जोडिएकाले प्रस्तावित मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयलाई मानविकी, व्यवस्थापन र कानुनका संकाय राख्ने अनुमति दिइएन । ती संकाय राख्ने उक्त विश्वविद्यालयको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य समितिले काँटछाँट गरेर ‘सच्यायो’ । नाममा ‘प्रविधि’ जोडिँदैमा प्रविधिइतरका अन्य विधा पढ्न/पढाउन नपाउने सोच राखेर कैंची चलाइएको भए यतिखेर संसारकै उत्कृष्ट प्राविधिक विश्वविद्यालय मानिने अमेरिकाको एमआईटीले अर्थशास्त्रका तेइस नोबेलविजेताहरू जन्माउँदैनथ्यो । गत वर्ष अर्थशास्त्रको नोबेल पुरस्कार पाउने एमआईटीका अभिजित बनर्जी र अस्थर दुफ्लोको प्रयोगशालाले रोबोट/रकेट बनाउँदैन, गरिबीको अनुसन्धान गर्छ । त्यसै गरी नेपालका वामपन्थीहरूले अक्सर उद्धृत गर्ने नोम चोम्स्की एमआईटीका भाषाविज्ञानका प्राध्यापक हुन् । तर एक्काइसौं शताब्दीमा विश्वविद्यालय बनाउन तम्सेका हामीले सन् १८६१ मा स्थापना गरिएको एमआईटीका संस्थापकहरूजतिको फराकिलो सोच पनि राख्न सकेनौं ।
उपल्लोस्तरका नीतिनिर्माताहरूको जस्तै साँघुरो बुझाइ विज्ञान–प्रविधिको कार्यान्वयन तहमा पनि छ । गत वर्ष पारित भएको विज्ञान–प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीतिले कल्पना गरेको विज्ञान परिषद्मा मन्त्रालयका सचिव, विश्वविद्यालयका उपकुलपतिबाहेक समाज विज्ञानका अध्येताहरू अटाएका छैनन् । त्यसैको छाप विज्ञान मन्त्रालयले गर्ने कार्यक्रमहरूमा स्पष्ट देखिन्छ । केही हप्तापहिले विज्ञान मन्त्रालयले ‘बहुविधागत अनुसन्धान केन्द्र (मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च सेन्टर)’ बनाउने भन्दै एउटा आशयपत्र मागेको थियो ।
त्यसमा आवश्यक ठानिएका विज्ञ सदस्यहरू सबै प्राकृतिक विज्ञान पढेकाहरू मात्रै थिए । बहुविधागत केन्द्रमा समाज विज्ञान नअटाउनुको कारण पंक्तिकारले सोध्दा, उक्त मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र समाज विज्ञान नपर्ने जानकारी पाइयो । समाज विज्ञानलाई विज्ञान मन्त्रालयले मात्रै होइन, स्वायत्त भनिएको नास्टले पनि कार्यक्षेत्रबाहिरै राखेको छ । हाल नास्टका चालीस प्राज्ञ र सत्र सहप्राज्ञहरू सबै कृषि, वनविज्ञान, मौसम विज्ञान, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र, इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य आदिजस्ता प्राकृतिक विज्ञान पढेका मात्रै छन् ।
नास्टको प्राज्ञ छनोटमा मात्रै होइन, कार्यक्रमहरूमा पनि समाज विज्ञान गयल छ । गत असारमा नास्टले ‘कोभिड प्रतिरोधका लागि प्रविधि विकास एवं नवप्रवर्तन’ शीर्षकमा अनुसन्धान सहायता प्रदान गर्‍यो । उक्त कार्यक्रममा छनोट भएका सबै अनुसन्धान प्रस्तावहरू प्राकृतिक विज्ञान र इन्जिनियरिङसम्बद्ध थिए, जबकि कोभिड–१९ को नियन्त्रणमा मानिसका आनीबानी, सामाजिक सम्बन्ध र संस्थागत दक्षतासम्बन्धी समाज विज्ञान क्षेत्रका थुप्रै व्यावहारिक अनुसन्धानका नतिजाहरूले तत्कालका लागि नीति–उपयोगी नतिजा दिन सक्थे । उदाहरणका लागि, मानिसहरूले किन लकडाउन उल्लंघन गरिरहेका छन्, मास्क नलगाउनुका मनोवैज्ञानिक वा सामाजिक कारण के हुन्, कस्तो सचेतनात्मक कार्यक्रम बढी प्रभावकारी हुन्छ आदिजस्ता अनुसन्धानहरू कोरोना नियन्त्रणका लागि उपयोगी हुन सक्थे । तर समाज विज्ञानसम्बद्ध यस्ता महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूतर्फ घोत्लिन विज्ञान क्षेत्रमा लागेका हाम्रा संस्थाहरूको साँघुरो बुझाइले दिएन ।
हामीकहाँ वैज्ञानिक आविष्कारलाई चमत्कारका रूपमा बुझ्ने परिपाटी छ, जसले यसको बहुआयामिकतालाई नकार्छ । उदाहरणका लागि, कोभिड–१९ सम्बद्ध वैज्ञानिक अनुसन्धान भनेकै भ्याक्सिन वा औषधिको विकास गर्नु मात्रै हुन्, अरू फाल्तु हुन् भन्ने सोच हावी छ । त्यही तीव्रमार्गी सोचको परिणाम यहाँ भ्याक्सिन र औषधिको फरकसम्म नबुझेका प्राध्यापक स्प्राइटको बोतलमा ‘कोरोनाको दवाई’ राखेर मिडियामा छाउँछन् । गुर्जोको बजार एक्कासि बढ्छ र बेसार पुराण भाइरल हुन्छ । पक्कै पनि महामारीले आक्रान्त विश्वलाई कोभिड–१९ को भ्याक्सिन चाहिएको छ, तर हाम्रोजस्तो देशले भाइरसविरुद्घको भ्याक्सिनको खोजमा अनावश्यक बल लगाउनुभन्दा भ्याक्सिनको वितरण र पहुँचमा नयाँ इनोभेसन गर्ने अनुसन्धानमा जोड दिनु उपयुक्त हुन्छ । हाम्रा लागि दूरदराजमा सर्वसुलभ हिसाबले भ्याक्सिन पुर्‍याउनु पनि बनाउनुजत्तिकै महत्त्वपूर्ण काम हो । भौतिक आविष्कारको जति महत्त्व छ, त्यति नै सामाजिक र व्यवस्थापकीय आविष्कारको पनि छ ।
सन् १९०८ मा अमेरिकी उद्योगपति हेनरी फोर्डको फोर्ड मोटर कम्पनीले ‘फोर्ड मोडल टी’ कार सार्वजनिक गर्‍यो । फोर्डले उत्पादनमा ‘एसेम्ब्ली लाइन’ भित्र्याएर ठूलो संख्यामा कार उत्पादन गर्ने विधिको आविष्कार गरे, जसले गर्दा सन् १९०८ मा उक्त कारको मूल्य ८२५ डलरबाट घटेर सन् १९१६ मा ३६० डलरमा पुग्यो । मूल्य घटेसँगै कार सर्वसाधारणको पहुँचको वस्तु बन्यो । कारलाई अमेरिकी जीवनको अभिन्न अंग बनाउन फोर्डको भौतिक आविष्कारको जति योगदान छ, सम्भवतः त्योभन्दा ठूलो योगदान छ उनको व्यवस्थापकीय आविष्कारको । उनले उत्पादकत्व बढाउन मजदुरहरूको कार्यसमयलाई चालीस घण्टामा सीमित गरे । यतिखेर ‘मोडल टी’ इतिहास बनिसक्यो तर उनको व्यवस्थापकीय आविष्कार– चालीस घण्टा काम गर्ने नियम– संसारभर चलिरहेको छ । फोर्ड कारको जस्तै मानव इतिहासलाई बदल्ने अर्को आविष्कार थियो— लुगा सिउने मेसिनलाई परिष्कृत पार्ने काम । सन् १८५३ मा अमेरिकी आइज्याक सिंगरले सहज सिलाइ मेसिन बनाए, जसले एउटा सर्ट सिलाउन लाग्ने तेह्र घण्टाको समयलाई एक घण्टामै सीमित गरिदियो । सिंगरको सिलाइ मेसिनलाई त्यति बेला १०० डलर (सन् २०१७ को मूल्यमा १,४०० डलर) पर्थ्यो, जुन गरिब अमेरिकीको पहुँचबाहिरको विषय थियो ।
उक्त कुरा बुझेका सिंगरले सिउने कललाई ५ डलर डाउनपेमेन्ट गरेपछि बाँकी पैसा मासिक किस्ताबन्दीमा तिर्ने गरी बेच्न थाले । पैसा पछि तिर्दै गर्दा हुने तर सामान तत्काल उपभोग गर्न पाइने उनको आविष्कारले सिलाइ मेसिनलाई घरघर पुर्‍यायो । र, जन्मायो संसारको फेसन उद्योग । कुनै बेला न्युयोर्कमा संसारकै सबैभन्दा अग्लो भवन भएको सिंगरको कम्पनी सन् १९९९ मा टाट पल्टियो तर उनको किस्ताबन्दीको सामाजिक आविष्कार अहिले घरदेखि कारसम्म, इलेक्ट्रोनिक्सदेखि घरायसी सामानसम्मको खरिद–बिक्रीमा विश्वभर चालु छ ।
फोर्ड र सिंगरले भौतिक आविष्कारसँगै सामाजिक आविष्कारलाई पनि लगे । एक्काइसौं शताब्दीका विकासका मुद्दा र चुनौतीहरू उनीहरूको समयभन्दा निकै ठूला र जटिल छन्, जसको हल गर्न विज्ञानप्रतिको एकांकी बुझाइले मात्रै सम्भव छैन । अहिले संसारभर विधागत बुझाइको गहिराइ जसरी बढ्दो छ, त्यसरी नै अन्तरविधागत सहकार्यको आयतन पनि फैलँदो छ । उदाहरणका लागि, विश्वको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको जलवायु परिवर्तनको ज्ञान संश्लेषण गर्ने अन्तरदेशीय निकाय आईपीसीसी र जैविक विविधताका क्षेत्रमा उस्तै काम गर्ने आईपीबीईएसमा प्राकृतिक र समाज विज्ञानका वैज्ञानिकहरूको अनुकरणीय सहकार्य छ । पछिल्लो समयमा त प्रकृति र समाज वैज्ञानिकका सहकार्यहरू एकतामा फेरिन थालेका छन् । दुई वर्षअघि मात्रै प्राकृतिक विज्ञानको अन्तर्राष्ट्रिय छाता संस्था काउन्सिल फर साइन्टिफिक युनियन र समाज विज्ञानको अन्तर्राष्ट्रिय छाता संस्था इन्टरनेसनल सोसल साइन्स काउन्सिलबीच एकता भएर इन्टरनेसनल साइन्स काउन्सिल बन्यो ।
अन्त्यमा, यतिखेर विज्ञानले चालकरहित कारदेखि मानिसको अनुवंशको फेरबदल गर्न सक्ने प्रविधिको विकास गरेको छ । यस्ता भौतिक आविष्कारहरूसँगै त्यसका आर्थिक, सामाजिक र कानुनी जटिलता बढेकाले ती क्षेत्रहरूमा सामाजिक आविष्कार चाहिएको छ । चालकरहित कारले दुर्घटनाका बेला बटुवालाई जोगाउने कि कारमा सवार मानिसलाई भन्ने जटिल नैतिक प्रश्नको जवाफ कारको भौतिक आविष्कारले मात्रै दिन सक्दैन, त्यसका लागि समाज विज्ञान चाहिन्छ । त्यसैले विषयगत गहिराइ लम्बिँदै जाँदा त्यसले छुने समाजका अन्य पाटाको बुझाइ यतिखेर अपरिहार्य बनेको छ । नेपालमा समाज विज्ञानको अनुसन्धानका लागि नास्टजस्तै सोसल रिसर्च काउन्सिल बनाउनुपर्ने तर्क पनि सुनिन्छ । तर विश्वभर बढिरहेको प्राकृतिक र समाज विज्ञानको सहकार्य र एकताको अभ्यासलाई हेर्दा र हाम्रो देशमा उस्तै खाले निकायहरू हुँदा उनीहरूबीचको खिचातानीको अनुभव देख्दा हामीले छुट्टै निकाय बनाउनुभन्दा भएकाहरूको समयानुकूल पुनर्गठन गर्ने र फराकिलो दृष्टिकोण पो बनाउने हो कि ?
प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७७ ०८:१५
यस्तै बेला हो सरकारले क्षमता देखाउने : जनस्वास्थ्यविद् वन्त
'अहिलेलाई सरकारले न्यूनतम उपचार खर्च बेहोर्नैपर्छ । जसलाई थप सुविधा चाहिएको छ, उसले शुल्क तिरेर थप सुविधा लिए भयो तर न्यूनतम उपचार सरकारले गर्नैपर्छ । हामीले यो सरकारले अप्ठेरोलाई नबुझेर भनेको होइन तर यही बेला हो सरकारले आफ्नो क्षमता देखाउने । '
कार्तिक ६, २०७७ स्वरूप आचार्य
काठमाडौँ — मुलुकमा एकातर्फ कोरोना संक्रमण अनियन्त्रित रुपमा विस्तार हुँदै गएको छ भने अर्कोतर्फ सरकार यसको नियन्त्रण प्रयासहरुबाट क्रमश: पछि हट्दै गइरहेको छ ।
डा‍‌‌. शरद वन्त, जनस्वास्थ्यविद्
यस्तो अवस्थामा राज्यको दायित्व के हो र अब संक्रमणले कस्तो रुप लेला भन्नेबार जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तसँग स्वरुप आचार्यले गरेको कुराकानी :
संक्रमितको संख्या हरेक दिन बढ्दै गइरहेको छ । सरकार भने परीक्षण गर्दिनँ, उपचार पनि गर्दिनँ भन्दै छ । महामारीको पछिल्लो घटनाक्रमबारे तपाईंको बुझाइ के छ ?
अहिले सबैको चासो यसैमा छ । हामी यही विषयमा गम्भीर भएर सरकारसँग बहसको प्रयास पनि गरिरहेका छौं । अब हाम्रो सीमा भनेको त्यही बहस मात्रै हो । सरकार जति संवेदनशील हुनुपर्ने हो, त्यो भएजस्तो देखिँदैन । सरकारी निर्णयको प्रक्रिया पनि कसो हो, के हो त्यो पनि बुझिँदैन । त्यसैले अहिले अस्तव्यस्त भएको अवस्था छ । अब यो कतातिर जान्छ भनेर पूर्वानुमान गर्न गाह्रो भइसक्यो ।
सरकार आफ्नो पछिल्लो निर्णयमा एकदमै अडिग छ भन्ने देखिएको छ । सरकारको संवेदनशीलताले नै नेपालमा कोरोनाको महामारी कुन दिशा र गतिमा अगाडि बढ्छ भन्ने निर्क्योल गर्छ । सरकारले आफ्नो निर्णयलाई सही ठहर्‍याउनका लागि जुन प्रकारको तर्क अगाडि सारिरहेको छ, त्यो पटक्कै तर्कपूर्ण छैन ।
अहिलेको अवस्थालाई हेरेर नेपालमा कोरोना महामारी नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइसक्यो भन्न सकिन्छ ?
मलाई नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो जस्तो लाग्दैन तर यही रूपमा अगाडि बढ्ने हो भने क्षति धेरै हुने देखिएको छ । हिजोका दिनमा नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गर्दा जुन हिसाबले हामीले क्षति कम हुन सक्छ भनेर सोचेका थियौं, अब त्यो बढ्ने देखिन्छ । त्यसैले म के भन्छु भने संक्रमण नियन्त्रणबाहिर गएकाले समस्या भएको होइन, हामीले यसलाई नियन्त्रणमा राख्नका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय नगरेकाले बढेको मात्रै हो । ‘नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो’ भन्नुको अर्थ त जति गरे पनि केही नहुनु हो ।
म त अझै पनि नियन्त्रण, रोकथाम तथा संक्रमितहरूको उपचारमा सरकारले ध्यान दिने हो भने नियन्त्रणमा आउँछ भन्छु । संक्रमणको विस्तार तथा संक्रमितहरूको व्यवस्थापनमा ध्यान दिने हो भने अहिले पनि यो प्रकोप हाम्रो नियन्त्रणमै छ । पक्कै पनि हिजोको दिनमा भन्दा आज हामीले थप बढी मिहिनेत गर्नुपर्ने भएको छ तर इमानदार भएर लाग्ने हो भने नियन्त्रणमा आउँछ ।
सरकार जुन रूपमा संवेदनशील हुनुपर्ने हो, त्यो नभएका कारण प्रकोप नियन्त्रणबाहिर गएजस्तो देखिएको हो त ?
पक्कै हो । सरकार संवेदनशील भएन भने अवश्य नै प्रकोप नियन्त्रण बाहिर जान्छ । सरकार संवेदनशील भएन भने सानो स्तरको संक्रमण पनि नियन्त्रणबाहिर जान सक्छ । केही पनि नगर्ने हो भने त संक्रमण फैलिँदै जान्छ । अस्पताल आउन सक्ने मान्छे आउँछन्, नसक्ने आउँदैनन् ।
सरकारको पछिल्लो कदम हेर्दा तपाईंहरू जे गर्नु छ गर्नुस्, हामी केही गर्न सक्दैनौं’ भन्ने जस्तै छ नि हैन र ?
सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा त्यसो नभने पनि आशय त्यस्तै हुन जान्छ । सरकारले हात उठाएपछि स्थितिले जहाँ लैजान्छ, त्यहीं जानुपर्ने वातावरण बन्दै जान्छ । यसले गर्दा क्षति झन् धेरै हुन्छ । त्यसमा पनि गम्भीर विषय त के हो भने कति क्षति हुन्छ भनेर आकलन गर्न कठिन हुन्छ । नियन्त्रणका उपाय अपनाइरहँदा पो क्षतिको आकलन गर्न सहज हुन्छ । अनियन्त्रित छोडिदिँदा कहाँ के–के असर गर्छ भन्न सकिन्न । त्यो झनै जटिल विषय हुन्छ
आजका दिनमा हाम्रो चुनौती के हो त ?
हिजो हामीलाई संक्रमणको विस्तार रोक्ने मात्रै चुनौती थियो । अब त्यो चुनौती आफ्नो ठाउँमा छँदै छ, संक्रमित व्यवस्थापनको चुनौती पनि थपिएको छ । अहिले हामीकहाँ सक्रिय संक्रमितको संख्या धेरै छ । हिजोको तुलनामा आज झनै बढ्दै गइरहेको छ । हिजोका दिनमा हामीसँग नियन्त्रण गर्ने अवसर थियो भन्दै आइरहेका थियौं । त्यो किनभने उपचारभन्दा नियन्त्रण कम खर्चिलो हुन्छ । कुनै पनि रोग नियन्त्रण गर्नका लागि उपचार गर्नुभन्दा कम खर्च लाग्छ ।
अब त नियन्त्रणका साथसाथै संक्रमितको पहिचान र उपचार पनि गर्नुपर्ने स्थिति छ । त्यो अवश्य नै महँगो हुन्छ । संक्रमितहरूको उपचार राज्यले गर्छ, संक्रमित आफैंले गर्छन् वा अर्को कुनै तेस्रो पक्षले गर्छ त्यो छुट्टै कुरा हो तर खर्च त हुन्छ । अब त्यो महँगो हुँदै जान्छ । हामी त्यो चरणमा प्रवेश गरिसकेका छौं । सायद, त्यसैले सरकारले हात उठाउन खोजेको होला ।
सरकारले अब महामारी नियन्त्रण गर्न के–के गर्नुपर्छ त ?
सरकारले चाहेको खण्डमा स्रोत परिचालन गर्न नसक्ने अवस्था छ जस्तो मलाई लाग्दैन । सरकारले प्राथमिकीकरण गरेर काम गर्ने हो भने केही पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेका छैनौं । हिजोभन्दा केही जटिलता थपिएको छ । समयमै हामीले व्यवस्थापन गरेर रोकथाम गर्न नसकेपछि जटिलता थपिनु स्वाभाविक पनि हो । त्यसैले यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउन हिजो हामीले संस्थागत तथा व्यक्तिगत रूपमा जे जे गर्नुपर्थ्यो, अब थप सजग भएर त्यसको पालना गर्नुपर्छ । हिजो आयातित केस धेरै थिए, संक्रमितहरूको पहिचान गर्न सहज थियो । अब त घरघरमा संक्रमण विस्तार भएको छ । तिनले थाहै नपाई अरूमा संक्रमण फैलाइरहेका छन् । उनीहरूको पहिचान गरेर उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
यसका साथै होम आइसोलेसनमा बस्नेको संख्या बढ्दै गएको छ । यसले पनि संक्रमण विस्तारमा सहयोग गरिरहेको छ जस्तो देखिन्छ । त्यसैले समुदायस्तरका आइसोलेसनलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ । एकातर्फ सामान्य संक्रमितले अस्पतालमा गएर भर्ना हुनुपर्ने अवस्था आउँदैन र अस्पतालमा दबाब कम हुन्छ । अर्कोतर्फ घरपरिवारमा पनि संक्रमण फैलने सम्भावना घटेर जान्छ । सरकारलाई परिरहेको आर्थिक दबाब हामी बुझ्छौं तर कोभिड अस्पताल बनाउनैपर्छ । सबै अस्पतालमा ५० प्रतिशत बेड छुट्याएर उपचार गर्नु उचित होइन । त्यसले व्यवस्थापनमा झन् धेरै जटिलता थप्छ । अर्को कुरा, कोभिडबाहेकका बिरामी उपचारबाट वञ्चित हुने अवस्था पनि आउन सक्छ ।
अहिलेलाई सरकारले न्यूनतम उपचार खर्च बेहोर्नैपर्छ । जसलाई थप सुविधा चाहिएको छ, उसले शुल्क तिरेर थप सुविधा लिए भयो तर न्यूनतम उपचार सरकारले गर्नैपर्छ । हामीले यो सरकारले अप्ठेरोलाई नबुझेर भनेको होइन तर यही बेला हो सरकारले आफ्नो क्षमता देखाउने । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सहयोगका लागि छलफल गर्नुपर्‍यो । सरकारले आत्मनिर्भर भएर आन्तरिक स्रोत परिचालन गरेर देखाउने समय पनि हो यो ।
प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७७ ०८:११